Michaëlle Jean:NANKASITRAKA NY EZAKA VITAN’NY FITONDRANA -
AccueilRaharaham-pirenenaMichaëlle Jean:NANKASITRAKA NY EZAKA VITAN’NY FITONDRANA
Ela ny niandrasana ny fananganana ny Vohitry ny Frankofonia ary izao tafatsangana soa aman-tsara izao. Vohitra natao hanamafisana ny firahalahiana eo amin’ny firenena mielipaka manerana ny kaontinanta sy i Madagasikara. Tratra izao ny tanjona ary niarahaba ny ezaka vitan’ny fitondrana malagasy ny sekretera jeneralin’ny OIF, Ramatoa Michaelle Jean. Mizara lanja mitovy amin’ireo firenena rehetra mpikambana eo anivon’ny Frankofonia i Madagasikara ary tsy ho latsa-danja manoloana ny tombontsoa ara-toekarena tokony sitrahana amin’ny alalan’ny ady atao manoloana ny fahantrana. Tokana ny tanjona hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia ny ady amin’ny fahantrana irery ihany. Tsy tokony hisy ny olana atao ho sakana ankoatra izay, tombontsoan’ny mponina malagasy hatrany moa no katsahina ao anatin’ny asa rehetra izay atao. Tsy latsa-danja amin’izany ny fandraisantsika ny Frankofonia. Raha ny vohitry ny Frankofonia manokana izao dia maherin’ny 3000 ireo asa niforona tamin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa maro hiatrehana ny Frankofonia izay. Manodidina ny 50 eo ho eo ireo karazana fotodrafitrasa tao anatin’ny « Village de la francophonie » natsangana tao anatin’ny 75 andro raha ny fanamarihana nataon’ny sekretera jeneralin’ny OIF hatrany. Tsy ireo orinasa lehibe ihany no misitraka tombontsoa mivantana amin’ny alalan’ny fandraisana ny Frankofonia amin’ity herinandro ity. Miainga hatramin’ireo kely indrindra ka hatramin’ireo mpandraharaha efa matihanina indrindra eo amin’ny sehatra sahaniny dia samy ahazo tombontsoa avokoa. Ho an’ny ao amin’ny Vohitry ny Frankofonia izao dia ireo mpanao asa tanana no nomena tombondahiny goavana. Maro an’isa izy ireo eto amintsika ary tokony omen-danja satria anisan’ny fitaratry ny vokatra malagasy ka mendrika ny hampiroboroboana.
Fampandrosoana no tanjona…
“Tsy mijanona ny ezaka atao fa mitohy hatrany” hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lanonam-panokafana ny vohitry ny Frankofonia omaly izay hatrany. Fotoana handraisana fanapahan-kevitra goavana izao, tsy mba naman’ireo mihemotra kosa ny andrim-panjakana mahefa manoloana an’izay. “Tokony hirehareha manoloana ny ezaka vita ianareo” hoy ny sekretera jeneralin’ny OIF. Hafaliana feno no nameno ny endrik’ireo nanatrika ny fisantarana ny Vohitry ny Frankofonia izay fitaratra ho an’ny vahoaka malagasy sy ireo vokatra ao aminy. Fotodrafitrasa hanamarika hafaliana maro, fety sy korana ny Vohitry ny Frankofonia. Tsy ny amin’ny fandraisana ny Frankofonia mandritra ny herinandro ihany, fa ho an’ny Malagasy tsy vaky volo rahatrizay. Hanamarika fifampizarana eo amin’ireo firenena mielipaka maneran-tany ity Vohitry ny Frankofonia tafatsangana ity. Manodidina ny 112 moa ireo trano heva eny an-toerana, ary ahitana ireo mpandray anjara avy amin’ireo firenena maro mpikambana ao anatin’ny Frankofonia. Ho an’i Madagasikara dia hita ao avokoa ireo orinasa sy mpanao asa tanana avy amin’ny lafy valon’ny nosy. Omen-danja lehibe ny tanora ao anatin’ny Vohitry ny Frankofonia. Hetsika maro no hanamarika ny fandraisantsika ny Frankofonia mandritra ny herinandro iray manontolo ao an-toerana. Omen-danja ao amin’io toerana io ihany koa na ireo fiarahamonim-pirenena, mpanao gazety, orinasa madinika sy salantsalany, ary ny kolontsaina manerana ireo firenena ao anatin’ny Frankofonia. Maherin’ny 500 moa ireo mpanakanto hifarimbona hanao ny fanentanana mandritra ny herinandro…